Funda Ngokuphathelele Ukuxuba Khemistry
Isisombululo sinomxube ohambelana neenxalenye ezimbini okanye ngaphezulu. I-arhente yokuphala isisombululo. Inkunkuma echithwayo iyona nto. Iinqununu zesisombululo zi-atom, ion, okanye i-molecules, ezenza ukuba zi-10 -9 m okanye zibe ziincinci ububanzi.
Umzekelo: Ushukela kunye namanzi
Iingqungquthela zokuxininisa zikhulu kunezo ezifumaneka kwisisombululo. Izixhobo zokumiswa zingasatshalaliswa ngokulinganayo ngeendlela zokucwangcisa, njengokuba udibanisa iziqulatho, kodwa izakhi ziya kuphuma.
Umzekelo: Ioli kunye namanzi
Imizekelo engakumbi yokumiswa
Izidumbu eziphakathi kwesikhulu phakathi kwalabo abakho kwisisombululo kunye nokuxinwa kungaxutywa ngendlela yokuba bahlale behambisa ngaphandle kokulungiswa. Ezi ntlukwano zikhula ngobukhulu ukusuka kwi-10 -8 ukuya kwi-10 -6 m ubukhulu kwaye zibizwa ngokuba yi-colloidal particles okanye i-colloids. Umxube wabo ubizwa ngokuba yi-colloidal dispersion . Ukusabalalisa kwe-colloidal iqukethe i-colloids kwiphakathi yokusabalalisa.
Imizekelo yeMire yeColloids
Iziqu, iziqulatho, kunye nefuthe zonke zinokudibaniswa ukuze zenze i-colloidal dispersions.
Ama-aerosols : ii-particle eziqinileyo okanye ezikhoyo kwi-gas.
Umzekelo: Umsi uqinile kwigesi. Inkohlakalo ingumbane kwigesi.
Izisombululo : ii-particle ezinqamlekileyo kumanzi.
Umzekelo: Ubisi lweMagnesia yintsimbi ene-magnesium hydroxide eqinile emanzini.
Imimulsions : amaqhekeza e-liquid kwi-liquid.
Umzekelo: iMayonnaise ioli emanzini .
Iibelisi : utywala obuqinile.
Imizekelo: i-gelatin iprotheni emanzini.
Ukhawulezileyo unesihlabathi emanzini.
Unokuxelela ukugxininiswa kwi-colloids kunye nezicombululo kuba iinqununu zokuxinwa ziya kugqitywa. I-Colloids iyakwazi ukwahlula kwisisombululo esebenzisa umphumo weTyndall . Isibonda sokukhanya esadlula kwisisombululo sangempela, njengomoya, asibonakali.
Ukukhanya okudlula kwi-colloidal dispersion, njenge-air smoky okanye i-air foggy, iya kuboniswa ngamaqhekeza amakhulu kunye nesibonda sokukhanya siya kubonakala.
Igosa elilahlekileyo le-Inca
Izizathu ezi-8 zokuthi kungani i-Marijuana ifanele ibe ngumthetho
IsiCwangciso seSifundo seProduct Acrostic